Kuparidza Kumucheto-cheto Kwekumaodzanyemba kweEurope | Tsamba Inobva kuGreece
Tsamba Inobva kuGreece
CHIKEPE chedu pachinonanga kune kamwe kachitsuwa kari mugungwa reMediterranean, makomo anoyevedza eLevká ari pachitsuwa cheCrete anosara zvishoma nezvishoma. Muchikepe chedu mune vanhu 13 vane manyukunyuku okunoparidza kukachitsuwa kanonzi Gavdos kari kumucheto-cheto kwekumaodzanyemba kweEurope.
Zvinoita sokuti tichafamba zvakanaka musi uyu uri kupisa muchirimo. Asi mhepo yakasimba inongoerekana yasimuka mugungwa zvokuti chikepe chedu chinenge chisisina kugadzikana uye mwoyo wangu unomira. Izvi zvinondiyeuchidza nhoroondo iri muBhaibheri yomuapostora Pauro, uyo akambosanganawo nedutu rine simba mugungwa iri mazana emakore apfuura, chitsuwa cheGavdos chichiri kunzi Kaudha. (Mabasa 27:13-17) Ndava kungoti dai tikasvika zvakanaka kuGavdos.
Trypití Cape iri kumucheto-cheto kwekumaodzanyemba kweEurope
Iye zvino tava kuona makomo ari kubudikira mugungwa, kunova ndiko kwatiri kuenda. Makomo acho akati sandara uye akareba kuenda mudenga mamita anenge 300. Chitsuwa ichi chakafara nokureba makiromita anenge 26 uye chine miti yakawanda yemipaini netumwe tukwenzi. Mune dzimwe nzvimbo miti inonzi mijunipa inowanikwa pamhenderekedzo dzegungwa.
Pane imwe nguva chitsuwa ichi chaimbogarwa nevanhu 8 000 asi iye zvino chava kugarwa nevasingasviki 40. Vanhu vepachitsuwa ichi vachakasarira chaizvo paupenyu. Kunyange zvazvo paine zvikepe zvinotakura zvinhu zvinowanzopfuura nepachitsuwa ichi, chikepe chinotakura vanhu kubva muGavdos kuenda kuCrete chinofamba apo neapo, uye kana mamiriro ekunze asina kunaka chinombononoka kana kutotadza kuenda zvachose.
Tauya kuno kuGavdos kuti tizoudza vanhu mashoko anofadza uye anokurudzira okuti mune ramangwana zvinhu zvichanaka uye vanhu vachararama nokusingaperi vasingarwari. Chikepe chedu chava kunomira, uye tava neshungu dzokuenda pamhenderekedzo kuti tiparidze mashoko akanaka aya.
Tinosvika tarukutika nokukuchukudzwa mumvura kwemaawa mana nehafu, zvichiratidza kuti hatina kuita mufambanyore kuuya kuGavdos. Asi tinonzwa zviri nani mushure mokumboti rarei uye kunwa kofi. Mushure mokudzokorora muchidimbu nhoroondo yorwendo rwomuapostora Pauro uye kunyengetera nomwoyo wose, tagadzirira kutanga basa redu.
Vanhu vokuno vane ushamwari uye mutsa. Vanotipinza mudzimba dzavo uye vanotipa zvokudyira-dyira. Hatingovaparidziri mashoko akanaka anobva muBhaibheri chete asi tinovabatsirawo pane zvimwe zvinhu. Somuenzaniso, patinenge tichitaura nomumwe mukadzi kubasa kwake, mumwe wedu uyo anogadzira magetsi anoona chinhu chakafa obva amugadzirira. Mukadzi wacho anobayiwa mwoyo chaizvo. Anobvuma mabhuku eBhaibheri atinomupa otirumbidza uye otaura zvakanaka nezvoushumiri hwedu. Mumwewo mukadzi anoti: “Basa renyu ibasa raMwari, kwete revanhu, uye izvi zviri pachena nokuti mauya kuzoparidza kuchitsuwa chino chiri kure.”
Zvinoita sokuti mabhuku eBhaibheri atauya nawo ari kufarirwa chaizvo nevanhu. Mumwe murume anogamuchira Nharireyomurindi neMukai! uye anoti anoda mamwe mabhuku okuzoverenga mumwedzi yechando. Mumwewo anoda mabhuku edu uye mamwe acho anoda kuaisa mushopu make kuti vatengi vaverengewo. Anotipa kero yake kuitira kuti timutumire magazini mwedzi woga woga. Imwe mhuri inofara chaizvo painoratidzwa kuti kachitsuwa kavo kanotaurwa muBhaibheri. Mhuri iyi inogamuchirawo magazini edu.
Sarakíniko Bay, ine chivako chaigara vasungwa nechikwangwani chine mashoko okuvayeuka
Kunyange zvazvo matambirirwo aitwa shoko redu nevanhu ava achikurudzira chaizvo, kushanya kuGavdos kunoita kuti vamwe vedu vave nendangariro dzinosuwisa. Pedyo nenzvimbo inonzi Sarakíniko Bay, pane chivako chaimbogara nhapwa dzezvematongerwo enyika. Emmanuel Lionoudakis, uyo aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha, akatapwa kuno muma1930 nenyaya yokuparidza. * Chitsuwa cheGavdos chepanguva iyoyo chinorondedzerwa se“chitsuwa chisina zvibereko chinongobereka marize ane uturu uye senzvimbo ine vanhu vakawanda . . . vakafa nenzara, urombo hwakanyanyisa uye zvirwere, zvichiita kuti chikodzere kudaidzwa kuti chitsuwa cherufu.” Lionoudakis airedza hove kuti awane zvokudya uye aishanda nesimba kuti aparidzire vamwe vasungwa sezvo ari iye aingova Chapupu chete munzvimbo ino. Mwanasikana wake, mukuwasha wake uye muzukuru wake vanoshungurudzika pavanoona paaigara makore anenge 70 akapfuura. Muenzaniso wake unotikurudzira kuti tirambe takatendeka uye tichishanda nesimba muushumiri.
Gavdos yakanga isiri nzvimbo inonakidza kugara kuvapoteri vaivako. Asi kupera kwevhiki kuno isu tanakidzwa chaizvo nokuparidza muchitsuwa chacho chose uye tatopa vanhu vane ushamwari magazini 46 nemabhurocha 9. Tinotarisira kuzoonana zvekare neshamwari dzedu!
Nguva yokuti tisimuke yasvika takavarairwa. Asi mamiriro ekunze haana kunaka zvekare uye hatichagona kusimuka na5 zuva rovira. Iye zvino pava pakati pousiku uye tiri kugadzirira rumwe rwendo rwakaoma. Tinozosimuka na3 dzemangwanani uye tinosvika kuCrete pashure pekuvhiringidzwa nemhepo yomugungwa kwemaawa mashanu. Taneta zvikuru uye tinobuda muchikepe makumbo edu achidedera, asi tiri kufara kuti taita kuti zita raJehovha rizivikanwe muchitsuwa cheGavdos. (Isaya 42:12) Tose zvedu tinobvuma kuti tashandira zviripo. Munguva pfupi iri kuuya tichange takanganwa matambudziko atakasangana nawo asi tine chokwadi chokuti hatizombofi takakanganwa rwendo urwu.
^ ndima 11 Nyaya youpenyu yaLionoudakis iri muNharireyomurindi yaSeptember 1, 1999, mapeji 25-29.